UCristóbal, ingelosi yakho ekugcinayo kwivili. Olu luhlobo olutsha lwe-SEAT prototype | Iindaba zeGajethi
Ihlabathi leemoto liqhubeka linxulunyaniswa naleyo yetekhnoloji kwaye kulo mzekelo lowo uphetheyo ukubonisa yayo iindaba ezizayo zeemodeli ezintsha ezizayo ibe sisihlalo saseSpain. Ngomntu omtsha we-SEAT uLeon Cristóbal, ifemi ibonisa umxholo wayo wemoto kwi-Smart City Expo e-Barcelona.
Ukhuseleko luyinto ebaluleke kakhulu kwiimoto zanamhlanje kwaye kuyacaca ukuba olu khuseleko luhamba kunye nokuphunyezwa okuhle kwetekhnoloji, kule meko iprototype ephuhliswe yi-SEAT inabancedisi bezokhuseleko abathandathu, kubandakanya nebhokisi emnyama efana naleyo isetyenziswe kwiinqwelomoya. Kodwa le Cristóbal iyaqhubeka ...
Njengoko uStefan Ilijevic, iNtloko yoPhuculo lwangaphambili, amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye noQeqesho e-SEAT, watshoyo ekuboniseni umxholo, le ndlela intsha yemoto ingalinciphisa kakhulu izinga lengozi ezindleleni kwihlabathi liphela. ngokukodwa, kukho iipesenti ezingama-40% ezimbalwa.
Kwaye kukuba singakwazi ukulawula umqhubi ngenxa yetekhnoloji ephunyeziweyo, ewe, umqhubi ekugqibeleni uxanduva lweengozi ezininzi, ke thintela isithuthi ukuba siqale ngaphandle kokuqala ukubeka ukhuseleko lwebhanti yesihlalo, ukulawula isantya ukuba umntwana wakho uthatha imoto okanye uyithintele ukuba iqale ukuba ngaba uvavanyo lomqhubi luchaphazela ukuphefumla utywala ziyinxalenye yemisebenzi eyi-19 efanelekileyo eyenziwe eCristobal.
Enye yezo zinto zibalaseleyo ngaphandle kwezo zikhankanywe apha ngasentla kwaye zinxulumene nokuqalisa imoto, ngokungathandabuzekiyo yile bhokisi emnyama. Ngale ngqiqo, yenza umsebenzi ofanayo onayo kwi-aeronautics kunye Xa isithuthi sibona ukuqhekeka ngesiquphe, ikhamera yangaphambili irekhoda imizuzwana eli-10 yokugqibela yokuqhuba kwaye zonke izikhombisi ziyarekhodwa: isantya, ukukhawulezisa kunye nokuqhekeza. Le vidiyo ithunyelwa ngqo kwifowuni yomqhubi onokuthi, kwimeko yengozi, abe nobungqina bokucacisa iimeko zento eyenzekileyo.
Iimoto ziya kulumka ngalo lonke ixesha enkosi ngokuphunyezwa kwetekhnoloji kwaye oku kulungile, ukuba awubuzi kubanini beTesla. Ukuba ufuna ukufunda ngazo zonke iindaba zelixesha elizayo kodwa imoto elandelayo yenkampani yelizwe lethu, ungathandabuzi kwaye ungene iwebhusayithi esemthethweni ukufumanisa zonke iindaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UCristóbal, ingelosi yakho ekugcinayo kwivili. Olu luhlobo olutsha lwe-SEAT